Ukuqalwa ngokusebenzisa i-psychotherapy - I-Afrikhepri Fondation
Welcome PSYCHART KOMZIMBA
QLapho unebhadi lokukhululwa ebugqilini bokukhiqizwa kongxiwankulu futhi kungekho msebenzi okukuhlanganisa nomphakathi, ubhekana nokuhlangenwe nakho okungakholeki okumangazayo: Lokho kokuzithola uphambi kwephiko lezinkanuko zakho ezingalawulwa. Ngakho-ke, uyashaqeka futhi ulingeke ukuba ubaleke le mimoya ehluphayo, noma ngokukhetha isixazululo esikuvukelayo, noma sokuphephela "ezweni elingenamuntu" le-psychosis. Ngokwazi kwethu isinqumo sethu siwele emisebenzini yezomsebenzi: "Ukubhalwa phansi" kokusekelwa kwezobuciko, okusivumele ukuthi sikhiphe izifiso zethu zangasese kanye nokubuyisa i-homeostasis yomzimba wethu. Ukuzitika ngogqozi ekubhaleni wedwa ekamelweni, akuyona yini indlela yokuzitholela wena, ngomphumela wokuhlehliswa "okuphushuliwe", esikhunjeni sendoda endala ethathwe usizi lokufa olwenza "ukubekezela" kubambelele empilweni ebalekayo?
Umbhalo lo kwaba yifindo lika-Ankh elasinamathelisa empilweni yangaphambilini elalisetshenziswa ngaphansi kwesimo sokuphila esimeni sempucuko. Okuhlangenwe nakho komuntu okhululiwe noma owokufika okhishwa inyumbazane, esikhundleni sokusifaka ezweni elingenamuntu le-psychosis, kusiholele ekusekelweni yi-imago ye-psychoanalyst (umama ongokomfanekiso), saya ezweni elingaphansi komhlaba lika " okhokho abangenakulinganiswa ”lapho sanikezwa khona ithuba lokuvuselela amabhethri ethu futhi sibuyele endaweni yethu yedwa ukuze sijulise isipiliyoni sethu sokuqala ngenxa yomsebenzi oqhubekayo we-" psycho-therapeutic "owagcina ngokuvuselelwa kolimi. Le mibhalo elandelayo ingumphumela wokuqonda iqiniso ngokusebenzisa ulimi lwamafomu angaphambi kokukhulunywa.
Ukwenza kwe-psycho-therapy kuzobe kusifundise ukuthi "sizibeke" ehlathini lomhlaba sibonga ukwakhiwa kwebhuloho (ulimi) elingokomfanekiso, umsebenzi ongcwele waso ukusivumela ukuthi sigcine ukuxhumana okuhlala njalo nezwe lemimoya. Ngenkathi ngihamba ngale ndlela phakathi kwamazwe womabili, angikwazi ukuzibamba kodwa ngibe nomcabango ongcwele ngalaba bazalwane ababengenayo inhlanhla efana neyami (leyo yomgibeli wesikebhe). Bekholelwa ukuthi isisombululo senkinga yokudingiswa kwabantu abamnyama baseYurophu ilele "ekubuyeni ezweni lakubo", u-Amos noPanda abazange banqikaze ukuthatha uhambo olubuyela emuva, u-Amos wabuyela eGhana nasePanda eCongo. . Njengoba sazi, amathemba abo ayephoxekile futhi bamukelwa kabi ngabantu bakubo ababathatha njengamakholoni "akhiwe". Ngokuqondene no-Angelo Soliman, umphathi omkhulu wamatshe nowayengumlingani kaMozart, owayefuna ukuhlanganiswa kwezenhlalo “ngobuzalwane obungokomoya”, siyazi ukuthi wagcina ngokuhlohlwa futhi wadalulwa njengodadewabo waseNingizimu Afrika, uSaartjie. UBaartman, "i-Hottentot Venus", ekufuneni kwezivakashi emnyuziyamu womlando wemvelo, "ngesikweletu esingakhokhiwe".
Lezi zinhlekelele zingachazwa ngeqiniso lokuthi ukuba nolimi okunikezwe amandla okucabanga ngobunye boMuntu akukho emiphakathini ngaphandle kokuqaliswa. Ngoba, kungumphathi wokuthwasa, okuthi, "ngokufaka" isenzo esenzweni ngezifiso, adale izimo ezincomekayo ekwakhiweni kwaso ngaphandle kokuthi "isihloko sokucabanga" esiyiqiniso besingakwazi ukuvela. Le yindawo yokusho ukuthi ukulamula komsebenzi wobuciko odala amafomu okwenziwa ngolimi kubalulekile ekuthwasweni kwabantu.
Ngokuzuzisa isintu, ukubuyisana kwabafowethu abayizitha (abamnyama nabamhlophe) kuzokwenzeka kuphela ngaphansi koxhaso lwamadlozi ajwayelekile u-Osiris angummeleli ophakeme.
NguZirignon GROBLI, Psychart Umeluleki
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Septhemba 25, 2021 12: 47 am
Ukuzalwa kolimi nokubhala: i-rock art ne-psycho-therapy
Bukela Ukubheja Okubili (2014)